Zim denied Commonwealth observer status - Business Daily News Zimbabwe
FOREIGN Affairs and International Trade minister Sibusiso Moyo will today make a presentation at a breakfast meeting on the sidelines of the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in London where he is expected to outline Zimbabwe's reform agenda.
"Zimbabwe does not have formal observer status at CHOGM and we understand will not be attending any Commonwealth events. However Foreign Minister Moyo is welcome in London and we are delighted he will take advantage of CHOGM to meet a number of key interlocutors in the margins," the spokesperson said.
On Zimbabwe's readmission to the Commonwealth the spokesperson said; "Applying is a matter for the Zimbabwean people to decide. Zimbabwe would have to formally apply to the Commonwealth secretariat and the final decision would then be for all Commonwealth members. However, the UK would strongly support a new Zimbabwe that is committed to political and economic reform, and the re-entry of Zimbabwe to the Commonwealth."
Zimbabwe quit Commonwealth in December 2003 after a meeting of the organisation's heads of government extended the country's suspension from its ranks.